watchOS 6 yave kuwanikwa kurodha pasi | Ndinobva mac
watchOS 6 yave kuwanikwa kurodha pasi
Iyo Cupertino kambani haina kukundikana uye nezuro masikati yakaburitsa vhezheni itsva yeiyo iOS 13 inoshanda sisitimu pamwe newatchOS 6 yeiyo smart wachi. Mamwe ese software shanduro dzeMacs, iPads uye Apple TVs vanofanirwa kumirira kwenguva yakati rebei.
Muchidimbu, chii chakashamisa nezuro masikati, pamusoro pekuburitswa kweiyo nyowani iPhone uye Apple Watch OS, ndeyekuti kambani yakazivisa kusvika kweIOS 13.1 mukati mevhiki rinopfuura ... Chimwe chinhu chinoshamisa pamwe nekushamisa, asi Isu fungidzira kuti haina kukonzerwa nedambudziko rakakura uye kana zvirizvo ingadai yakatangwa nhasi. Chero zvazvingaitika isu tatova neyakagadziridzwa yeiyo iPhone uye iyo Apple Watch iripo yekutenda tarisai 6.
Mumwedzi yese iyi takave nema beta akati wandei, akati wandei, saka tinogona kutaura izvozvo iyo inoshanda sisitimu yemawindo uye iPhones yakanyatso kukwikwidzwa. Mumaawa ekutanga mushure mekuvhurwa kwayo kwepamutemo hapana zvichemo zvakakura mukushanda uye zvese zvinoita kunge zvinoshanda zvakanaka.
Zvinokurudzirwa mune izvi zviitiko kuti iwe uvandudze yako yechiuno chishandiso nekukurumidza sezvazvinogona uye wotanga kunakidzwa neshanduro nyowani. Rangarira kuti kugadzirisa iyo wachi iwe unofanirwa kuve neiyo iPhone yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni, nezuro chete takakuratidza mune diki chinyorwa zvese zvaunoda kuti uzive kugadzirisa kuOSOS 6, tinoisiya iri pamusoro pemitsara iyi ine chinongedzo kuitira wakazviona. Zvino bata nakidzwa chii chitsva mune iyi vhezheni yeWatchOS 6Saka usamirira zvakare uye rova ​​iyo yekuisa kana iwe uine chero Apple Watch Series 3 kana 4 modhi, iyo Series 1 uye Series 2 ichaburitswa mumazuva mashoma. Series 0 zvine musoro zvakasara kunze kweyekuvandudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 6 yave kuwanikwa kurodha pasi
Avid uye Premiere ichagamuchira Apple's ProRes RAW fomati
Podcast 11 × 04: Iyo iPhone 11 ndiyo nyeredzi zvakare